Kormeere: 19ka Oktobar: Ardayda PreK-GR 5 waxay ku laabanayaan dhismayaasha si buuxda (ma khusayso ardayda DLA) | Updates
Fadlan ogow:fariintan waxaa loo diray dhammaan qoysaska iskuulada Osseo laakiin waxay si gaara u khusaysaa qoysaska ardayda ku jira xanaanada kahor ilaa fasalka 5aad ee hadda iskuulka dhigta habka isku-dhafka.
Habeen hore, guddiga waxbarashada ISD 279 waxay ansixiyeen soo jeedintaydii ahayd in ardayda xanaanada kahor iyo dugsiga hoose, PreK ilaa fasalka 5aad, dib ugu soo noqdaan dhismayaasha oo si toosa u yimaadaan laga bilaabo Oktobar 19keeda.
Tan macnaheedu waa:
Ilmaheena ku jira barnaamijka xanaanada kahor ee lacag la’aanta ee maalinwalba iyo kuwa fasalada K-5 waxay dib ugu soo laaban doonaan fasaladoodii caadiga ahaa sidii loo qorsheeyey maalinwalba, Isniin-Jimce.
Ilmaha ku jira Xanaanada iyo waxbarshada waalidka iyo barnaamijka waxbarashada khaaska ah ee waxbarshada hore waxay dib ugu laaban doonaanvfasaladoodii caadiga ahaa maalmahii loogu talogalay.
Ardayda ku jira fasalada 6-12 (iyo OEC) waxay ku sii jiri doonaan qaabkii isku-dhafka ahaa, iyagoo iskuulka tegaya laba maalmood saddexna ku dhiganaya qaabka waxabarashada durugsan.
Go’aankani wax raad ah kuma yeelan doono ardayda Akadeemiyada waxbarashada Durugsan.
Kooxda ila shaqaysaa waxay si taxader leh ula socdeen tirada dhaqdhaqaaqa xanuunka ee degmadeena iyo magaalooyinka nawaaxigeena waxayna la tashanayeen masuuliyiinta gobolka iyo degmada. Isbedelka usbuucyadii la soo dhaafay wuxuu muujinayaa hoos u dhac, kaas oo tusaya waxbarasho iskuulka la tegayo. Hawlgal ahaan,waxaa jira dib u habayn weyn oo waqti badan u baahan, waana sababta aanu Oktobar 19 u dooranay.
Maxaa is bedelaya?
Waxaa jira kala duwaansho muhiim ah oo u dhexeeya qababka isku-dhafka iyo imaatinka, sida lagu qeexay Qorshaha waxbarashada Amniga Minnesota. Labada kala duwaansho ee ugu muhimsan waa:
Ma jiri doonaan habkii tirada ardayda la xadidi jirey. Dhammaan ardayda dugsiga hoose waxay iman doonaan dhismaha isku mar basakuna si buuxda ayey u qaadi doonaan ardayda.
Iskuuladu waxay abuuri doonaan waqti badan oo u dhexeeya ardayda iyo macalimiinta xanaanada iyo kuwa iskuulada hoose sida ugu suurogashan laakiin ma xoojin doonaan kala fogaashihii 6da feet laysu jirsanayey inta iskuulku socdo.
Maxaa isku mid ahaan doona?
Ardayda iyo shaqaaluhuba waxay xiran doonaan Mask intay joogaan dhismayaasha iskuulka (oo ay ku jiraan basasku) waxaana la xoojin doonaa isticmaalka gacamo nadiifiyaha iyo gacmo dhiqista.
Waxaa kaloo la si wadi doonaa hawlo nadiifin dheeri ah, oo xooga la saarayo meelaha aad loo taataabto.
Shaqaalaha iyo ardayda waxaa laga rabaa inay sameeyaan baaritaan caafimaad kahor intaanay iskuulka ama shaqada iman.
Fadlan dib u eeg Qorshaha waxbarshada amniga ee marka iskuulka la joogo ee sharaxaya 17ka aag ee hawlgalka.
Jawaabta degmada ee kiisaska COVID waa sii socon doontaa.
Waan ogahay inay jiraan doodo badan oo xamaasadaysan oo taageersan ama ka soo horjeeda go’aankan. Fadlan ogow inaan isticmaalayno go’aan qaadashada ugu fiican ee la heli karo, waxaanuna si aada uga shaqayn doonaa kala wareega ugu haboon ee qaababka waxbarasho inta lagu jiro sanadka.
Waxaan si dhow ula socon doonaa dhaqdhaqaaqa xanuunkan anagoo qiimayn taxader leh ku samaynayna tirada heerka kiisaska degmada. Waxaan qiimayn ku samayn doonaa habka diyaargarowgeena waxaana la tashan doonaa waaxda Caafimaadka MN iyo waaxda waxbarshada iyo waaxda caafimaadka dadweynaha Hennepin markaan tixgelinayno u kala wareega qaababka dhici kara. Qaabka u guuridda dugsiga hoose ee waxbarshada tooska ah ma aha mid joogta ah, waxaa dhici karta inaan dib ugu noqono qaababkii kale midkood waqti kasta.
Sidaan ku sheegay fariintaydan u dambaysay, waxaad filan kartaan isbedel dhici kara sanadka gudihiisa anagoo isku aadin doona marba dhaqdhaqaaqa xanuunka iyo tilmaamaha gobolka.
Waad ku mahadsan tahay dulqaadkaaga iyo fahanka intaa siiwadno sannad-dugsiyeed aan caadi ahayn.